Maqaarka iyo ilaalinta iPhone-kaaga oo leh Nomad | Wararka IPhone
Maqaarka iyo ilaalinta iPhone-kaaga oo leh Nomad
Iyada oo qiimaha la maareeyay waqtiga dayactirka wixii iPhone-ka ah, ilaalinta taleefannadeenna casriga ahi waa muhiim. Haa, Naqshadeedu waa wax laga xumaado inay tahay in la qariyo, laakiin way ka fiican tahay ka xumaanta. Waxa aan sameyn karno waa ilaalin karnaa, laakiin ugu yaraan ku sameyn karno dhadhan fiican, waxna kama fiicna kiis maqaar wanaagsan oo loogu talagalay.
Nomad wuxuu na siiyaa kiiskeeda Caadiga ah ee Rugged, oo leh kahortaga dhicitaanka oo isku daraya maqaarka ugu tayada sareeya leh qaabka TPE, dhammaantood leh dhammaystir aad u fiican oo u lebbisan iPhone-keena sida ugu habboon. Haatanna waxay sidoo kale na siineysaa Kiiska Firfircoon ee Firfircoon, oo leh maqaarka Heinen ee diida biyaha oo leh muuqaal casri ah iyo mid isboorti.
1 Nomad Kiis Gaaban
2 Kiis Firfircoon oo Firfircoon
Nomad Kiis Gaaban
Waa mid ka mid ah kiisaska caadiga ah ee loo yaqaan 'Nomad', oo loo heli karo qaababkii hore ee iPhone iyo dabcan sidoo kale loogu talagalay iPhone 11 iyo 11 Pro cusub sanadkan. Maqaarka loo yaqaan 'Horween maqaar' waa dammaanad marka la eego adkeysiga oo runtii taabasho fiican leh. Muuqaalkeedu waa mid aad u qiimo badan oo dhammaadka kiiska si wanaagsan ayaa loo daryeelay, oo leh xariijinta midowga u dhexeeya maqaarka iyo baastada oo ficil ahaan aan la aqbali karin, oo aad ku dhowdahay inaad ilawdo inaad qarinayso naqshadda quruxda badan ee iPhone Pro.
Sirtu waxay ku jirtaa isku dhafka maaddooyinka: jirka polycarbonate, bambka TPE iyo maqaarka Horween ee ku yaal dhabarka dambe ee kiiska, kana tagaya gudaha dahaadhka microfiber-ka kaas oo ilaalin doona muraayadda jilicsan ee iPhone-kaaga. Tan waxaan ku heleynaa qorshe kaa ilaalin doona iPohen-kaaga dhicitaanka ilaa laba mitir oo dherer ah, Mahadsanidiin daminta daboolaya xayndaabka oo dhan, oo ay ku jiraan hoose halka ay ku hadlayaan iyo isku xiraha Danabku.
Kiiskan Rugged ma ku dari doono dhumuc aad u tiro badan iPhone-kaaga, in kasta oo aanu ahayn tan ugu khafiifsan, soo noqoshada wuxuu ilaaliyaa labada muraayadaha indhaha ee kamaradda dambe iyo shaashadda adigoo yeelanaya gees gees ka soo baxa ama ku filan si aad u dhigto meel kasta oo dusha ah adigoon ka baqayn inaad xoqdo shaashada. Faahfaahin kale oo aad u muhiim ah ayaa ah badhannada, kuwaas oo leh dusha sare oo tilmaamaysa iyaga taabashada oo si fudud ayaa loo riixay, iyagoo ilaalinaya "guji" riixista. Qeybta hoose, midig qeybta afhayeenka iyo makarafoonka, waxaan ka heleynaa labo qabasho oo aan dhigan karno curcurka ama qoorta.
Kiis Firfircoon oo Firfircoon
Kiiska kale ee Nomad uu si gaar ah ugu bilaabay iPhone 11 iyo 11 Pro cusub waa Kiis Firfircoon oo Firfircoon, oo la wadaaga kii hore dhammaan tilmaamaha tayada qalabka, ka ilaalinta dhicitaanka iyo dhammeystirka. Laakiin waxay leedahay maqaar kale: maqaarka Heinen ee biyuhu dilaan. Waa maqaar gaar ah, muuqaalkiisuna aanu ahayn wax la mid ah maqaarka caadiga ah, uguyaraan kan aan caadaysannay inaan ku haysanno kiisaska moobiilka, xitaa "urin maayo sida maqaar", laakiin haa, waxay leedahay taabasho cajiib ah.
Kaaga darane, qalad ha ka dhigin, ma aha kiis ku darsamaya iska caabbinta biyaha iPhone-kaaga, laakiin kiiska laftiisa ayaa u adkaysta biyaha. Taasi waa, maqaarku ma dhici doono haddii aad qoyso, laakiin iPhone-kaaga ayaa hubaal ah inuu haysto isla difaac ka dhan ah cabitaannada ay leedahay kiis la'aan, waxba ku kordhin maayo. Shakhsiyan, waa kiiska aan aad u jeclahay labada, Waxay ila tahay muuqaal ka casrisan oo isboorti badan, inkasta oo tani ay tahay fikir shaqsiyeed.
Waxaa jira kiisas badan oo ilaalin ah, sida kiisaska maqaarka, laakiin ma ahan kuwa badan oo bixiya muuqaalka maqaarka iyo difaac sare, aad ayey uga yar yihiin inay ku sameeyaan natiijada kiiskan Nomad Rugged Case iyo Active Rugged Case. Laba dabool oo aad isugu eg, laakiin leh maqaarro kala duwan oo bixiya natiijooyin kala duwan. Nooc ka sii casrisan (Rugged Case) oo lagu heli karo bunni iyo madow, iyo mid casri ah (Firfircoon Rugged Case), biyo u adkaysta oo lagu heli karo mocha iyo madow. Labada kiisba waxaa lagu heli karaa $ 49.99 bogga Nomad (isku xirka) y Kiiska Rugged waxaa laga heli karaa Macnífic € 42,99 (isku xirka) labada midabba, waxaan rajeynayaa inay dhawaan iyaguna yeelan doonaan qaabka firfircoon.
Biyo ma galeen
Ku dar dhumuc
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Maqaarka iyo ilaalinta iPhone-kaaga oo leh Nomad
Sida loo nadiifiyo taariikhda Siri ee iPhone
Waxaan sharaxeynaa sida loo joojiyo Apple Arcade kahor dhamaadka bisha bilaashka ah